Bulldog Broadcasting Network Leverages Studio Technologies 'Audio Solutions' NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Bulldog Broadcasting Network Leverages Studio Technologies 'Audio Solutions'
Bulldog Broadcasting Network Leverages Studio Technologies 'Audio Solutions'
Ardayda Hada Isticmaalaya Xarunta Dante®-ka-sarreeya ee ku-saleysan barnaamijka-Dante® ee Khibradda Fasalka loo Kobciyay
KEARNEY, MO, JANUARY 8, 2020 - Dugsiga Sare ee Kearney ee Missouri wuxuu ardayda siiyaa khibrad ku saabsan tabinta baahinta xagga shabakadda Bulldog Broadcasting Network (BBN). Fasalka war-baahinta ayaa u oggolaanaya ardayda inay daboolaan 25 kubbadda cagta iyo kubbadda koleyga ah oo lagu sii daayo ESPN3 sannad kasta, oo ay la socdaan dhowr ciyaarood iyo munaasabado kale oo lagu marti-galiyay kanaalka YouTube ee dugsiga. Si loo xoojiyo waaya aragnimada ardayda ee fasalka iyo duurka, iskuulku wuxuu dhowaan casriyeeyay qulqulka baahintiisa model 371A iyo model 373A Intercom Xirmooyinka suumanka, iyo wehel model 5422 Dante Intercom Audio engine ka Studio Technologies, soo-saaraha hannaanka tayada sare leh, video, iyo fiber-optic.
"Nidaamka isgaarsiinta 'Studio Technologies' Nidaamka isgaarsiinta Dante aad ayey u fududahay in la isticmaalo loona habeeyo si aan awood ugu sameysanay 'sanduuq ilaa suunka' qiyaastii 15 daqiiqo," ayuu yiri Ryan Blankenship, oo ah maamulaha tikniyoolajiyada ee Iskuulka Kearney. Karen Johnson, macalinka baahinta iyo kafaala-qaade BBN ee iskuulka ayaa intaas raaciyay, "tayada codka isgaadhsiinta ee soosaaraha soo saare, agaasime, iyo kaamirada kaamirooyinka waa weyn yihiin, aad ayey uga sarreeyaan xalkayagii hore."
Sida laga soo xigtay Johnson, nidaamkii kombuyutarka ee hore ee iskuulka ayaa ahaa mid aan la isku halleyn karin oo inta badan ardayda loo soo bandhigo cayayaanka. Intaa waxaa sii dheer, waxay raacisay in nidaamka aan la dhexgali karin si loogu daro maqalka barnaamijka 'BBN' maqalka madax-weynaha kaamirooyinka, sidoo kalena aan loo adeegsan karin in lagu siiyo isgaarsiinta agaasimeyaasha hibada hawada - iyadoo la adeegsanayo nidaam gaar ah. Iskuulku wuxuu go’aansaday inuu iibsado xalalka isgaarsiinta 'Studio Technologies' iyadoo lagu saleynayo talo ka timid Niles Media Group, oo ah iibiyaheega maxalliga ah ee waxsoosaarka baahinta. Bishii la soo dhaafay, Johnson wuxuu sheegay in kala-guurka ay bixiyeen horumar ballaaran oo socodka shaqada.
Si ka duwan nidaamkii hore ee iskuulka, Moodellada codka 'Mod5422 5422 ee telefishanka maqalka' ayaa bixiya xal dabacsan oo loogu abuuri karo isku-xirka khadka-iskuxirka iyo ilaha kale ee warfaafinta, sida IFB. Model XNUMX wuxuu taageeraa dhammaan waxyaabaha Dante-ku-habboon ee ay ka midka yihiin baaxadda suufka ay bixiyaan Studio Technologies. Mashiinka maqalka, oo ay weheliso shabakad caadi ah Ethernet, ayaa waxa keliya looga baahan yahay in lagu taageero barnaamijyo kala duwan oo laga helo tas-hiilaadka warfaafinta wareega iyo kuwa mobilada. Power-over-Ethernet (PoE) waxaa adeegsaday suumanka Studio-yada 'Studio Technologies', taasoo u oggolaaneysa in si fudud loo geeyo hal-cable
Johnson wuxuu yidhi: "Istuudiyahayaga iyo qolalka kantaroolka ayaa in ka badan 500-fiit u jira garoomada kubbadda cagta iyo goobta jimicsiga lagu qabanayo munaasabadaha, taasoo ka dhigaysa nidaamyada is-dhexgalka dhaqameed ee XLR ama wireless aan macquul ahayn in la isticmaalo," Johnson ayaa sharraxay.
Iyada oo la xoojinayo nidaamka teknoolojiyadda 'Dante Technologies' iyo qalabka isgaarsiinta ee 'Dante' ee degmada oo hadda jira 10Gb network network, degmadu waxay awooday in ay sii haysato istuudiyaha iyo qolka kontoroolka ee bartamaha ku yaal oo ay u adeegsato xalka fiidiyowga ee NDI.
Broadcast Broadcast Engineer Broadcast Engineering com Graham Chapman Prmoted toEditor Spears & Fiilooyinka studio Technologies TVU Networks Video Engineer	2020-01-14
Previous: Baselight waxay ka caawineysaa iney kuxiriso qurxinta Joogtada
Next: Shabakada TVU waxay soo dhaweynaysaa Jared Timmins oo ah gudoomiye kuxigeenka xalinta sare